Ordogan oo Sucuudiga ugu baaqay in ay soo dhiibaan raggii ka dambeeyay dilka Kashoggi - Halbeeg News
Ordogan oo Sucuudiga ugu baaqay in ay soo dhiibaan raggii ka dambeeyay dilka Kashoggi
ISTANBUL(HALBEEG)- Madaxweynaha dalka Turkiga, mudane Rajab Dayib Ordogan ayaa sheegay in Ankara aysan salka dhulka dhigi doonin illaa ay ku dhawaaqdo cidda bixisay amarka dilkii lagu khaarijiyay wariyihii Sucuudiyaanka ahaa, Jamaal Kashoggi.
Ordogaan ayaa sheegay in dalka Turkiga uusan marnaba diyaar u ahayn in uu mashaqo qoorta u sudho qoyska boqortooyada ee dalka Sucuudiga, hase yeeshee uu aaminsanyahay in xal kama dambeys ah oo laga gaaraa arrinka Kashoggi ay tahay mid u adeegeysa maslaxadda Sucuudiga, wuxuuna hoosta ka xarriiqay in aan la aqbali Karin hadalka dhaxal sugaha uu ku diidanyahay in cid gaar ah dusha laga saaro eedda dilka wariyaha.
Shir jaraa’id oo ay si wadajir ah u qabteen Ordogan iyo Trump gabagabadii shirkii G20 ee maalmahan ka socday maagalada Boines Aires ee dalka Argentine ayuu Ordogaan si weyn uga biya diiday mowqifka Maxamed Bin Salmaan ee ku aaddan dilka Jamaal Kashoggi.
Ordogan ayaa yiri “Kolkii aannu ogaannay in uu dhacay faldambiyeedkan ayaannu heegan galinnay cududdayada oo idil si aan daboolka uga qaadno xaqiiqada meesha ku dahsoon” ayuu yiri Ordogan.
Turkiga ayaa mar kale ku celiyay baaqeedii ahaa in Sucuudiga uu soo dhiibo raggii ka dambeeyay dilkii lagula kacay wariye Jamaal Kashoggi.
Madaxweyne Ordogaan ayaa Sucuudiga ku eedeeyay in ay ka gaabisay wada shaqeyn la yeelato Turkiga si caddaaladda loo hor keeno gacan ku dhiiglayaashii fuliyay dilka Jamaal Kashoggi.
“Waxaa aad muhiim u ah in raggaan lagu maxkamadeeyo gudaha dalka Turkiga si meesha looga saaro faragelin iyo gacan togaaleysi ay sameeyaan beesha caalamka” ayuu yiri Madaxweyne Ordogan.
Dhinaca kale kulan ay yeesheen intii uu socday shirka G20 ee ka dhacayay dalka Argentine ra’isal wasaaraha dalka Canada, Justine Trudeau iyo dhaxal sugaha boqortooyada Sucuudi Carabiya, Maxamed Bin Salmaan waxa uu mudane Trudeau ka codsaday dhaxal sugaha in si hufan uu uga jawaabo su’aalaha la xidhiidho dilka Kashoggi.
Wakaaladda wararka dalka Canada ee CBC ayaa soo xigatay in ra’iisul wasaaraha uu ku yiri dhaxal sugaha “waa lagama maarmaan in jawaabo ku habboon loo helo dilkii Jamaal Kashoggi” ayuu yiri Trudue.
Ra’iisul wasaaraha Trudeau ayaa sheegay in isaga iyo dhaxal sugaha ay si qotto dheer ay uga wada hadleen xiriirka labada dal ee Canada iyo Sucuudiga, wuxuuna ra’iisul wasaaraha carrabka ku adkeeyay in Otawa ay joogteyn doonto taageerada ay siiso difaaca xuquuqda aadanaha, isaga oo Riyaad ugu baaqay in ay xabsiga kasii deyso Ra’if Badawi oo ah nin Sucuudiyaan ah oo u ololeeya xuuqul insaanka.
Dabayaaqadii todobaadkii tagay aya ahayd kolkii dowladda Canada ay cunaqabatayn kusoo rogtay 17 ruux oo la rumaysanyahay inay ku lug lahaayeen dilka Khashoggi, kal hore ayay ahayd markii dowladahada Mareykanka, Faransiiska iyo Germany cunaqabateeyeen 17-kaas qof.
Cunqabateyntan lagu soo rogay dadkaas ayaa ahayd in gabi ahaanba la xayiro dhaq-dhaqaaqyadooda dhanka safarrada ay ku tagi jireen dalalka kale ee dunida.
Wasaaradda arrimaha dibadda Canada ayaa mar hore ku baaqaday in ay biyo kama dhibcaan tahay in baadhitaan rasmi ah lagu sameeyo sababaha dhaliyay dilka wariye Jamal Kashoggi iyada oo ku nuux nuuxsatay in falanqeynta dowladda Sucuudiga ay ka bixisay dilka wariyaha uu yahay mid aan daah furnayn oo aan sinaba loogu kalsoonaan Karin.
Wali waxaa taagan khilaafka iyo murannada is daba joogga ah ee sii laba lixaadsanaya ee ku aaddan dilkii wariyaha Suucuudiyaanka ah ee Jamaal Khashoggi loogu geystay gudaha qunsuliyadda dalkiisa uu ku leeyahay magaalada Istanbuul ee dalka Turkiga billowgii bishii Oktoobar ee ina gudubtay.
Masar oo Soomaaliya ka caawineysa howlaha shidaal baarista